Socio-eco Archives · Page 87 de 99 · déliremadagascar
Dans le cadre du mois de l’enfance, pour marquer son attachement aux valeurs humaines et particulièrement aux droits
Tombony ho an’ny kaominina ny nahavitàna ny SAC. Anisan’ireo kaominina 20, eto amin’ny faritra Analamanga, nahazo tohana avy
Ifanampiana ny fiainana ary tena ilaina amin’ny fiainana andavanandro ho amin’ny fandinganana ireo fampizarazarana sy fitsitokotokoana. ANKIZY (ANkohonana
Foto-drafitrasa ilain’ny mponina. Notanterahina ny 19 jona 2020 ny fanokanana ny village Orange eny Antanety Anosiala.
Asa maika tokony ho tanterahana. Nanambatra ny feony ny mpampiasa sy mpiasa eny anivon’ny sehatra tsy miankina noho
Socio-eco	 28 mars 2017 R Nirina
VIMA : Fitaovana hampandrosoana ny toe-karena Malagasy ny fihaonana tamin’ireo mpandraharaha sinoa.
Nanana fotoana nihaonana tamin’ireo mpandraharaha tsy miankina ara-ekonomika sinoa ireo delegasiona Malagasy niaraka tamin’ny Filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA. Noho ny fihaonana andiany faha-16 ny Forum BOAO an’i Asia (FBA), nifanakalo hevitra ny roa tonta. Continuer la lecture →
Socio-eco	 27 mars 2017 R Nirina
FARITRA ANALAJIROFO: Mamolavola planina hiatrehana taom-piotazana ny lavanila.
Anisan’ny hanjakan’ny tsy fandriam-pahalemana amin’ny resaka lavanila ny faritra Analajirofo. Mba iatrehana ny taom-piotazana amin’ity taona ity,manomboka mametraka drafitra mati-paika hiadiana amin’ny halatra lavanila ny eo anivon’ny faritra. Continuer la lecture →
Socio-eco	 23 mars 2017 R Nirina
VISION MADAGASCAR : Vonona ny hampandroso ny toekaren’i Madagasikara hatrany.
Nandritra ny “Forum International Afrique Développement” natao tany Casablanca (Maroc), nanamafy ny toky nomeny fa hampandroso ny toekarena Malagasy ny orinasa VIMA (Vision Madagascar). Efa nambaran’ny Vision Madagascar tamin’ny fivoriamben’ny mpamatsy sy mpampiasa vola, tany Paris farany teo fa efa misy fandaharan’asa momban’ny foto-drafitra asa sy ny angovo ho atao eto Madagasikara izay ampiasaina vola mitentina 300 tapitrisa dolara. Continuer la lecture →
Socio-eco	 22 mars 2017 R Nirina
MBOLA AZO AMPIASAINA NY « PERMIS DE CONDUIRE » SY NY « CARTE GRISE » ANKEHITRINY…
Nihemotra amin’ny 31 Desambra 2017 indray ny fe-potoana farany hiasan’ny taratasy fahazoana mamily fiara sy ny « carte grise » ny fiara-kodia. Antony lehibe tsy maintsy anovana ireo taratasy ireo ho biometrique ny andiovana ny « permis de conduire » sy ny « carte grise » sandoka raha ny fanazavana azo. Aorian’io fotoana io kosa dia ny « permis de conduire » sy « carte grise » biometrique no ampiasaina kanefa kosa tokony azo atao hatrany ny manova ny teo aloha.
BNGRC-ACM: Samy nitondra fanampiana ireo orinasam-pitaterana an’habakabaka Malagasy sy vahiny.
Andro faharoa ho an’ny hetsika fanampiana ireo traboina no notontosaina omaly faha-21 martsa 2017 teny amin’ny foiben’ny ACM. Nisy komity natsangana mihitsy hisahana ny fanangonana ireo tolo-tanana ho an’ireo lasibatry ny rivo-doza mahery ENAWO farany teo. Continuer la lecture →
FIANARANA AMBARATONGA AMBONY TSY MIANKINA: Misy oniversite mampiasa ny fankatoavana lalam-piofanana iray ho an’ny sampam-pianarana rehetra.
Betsaka ny tanora vao afaka bakalorea no tsy mahafantatra akory ny tena marina ambadiky ireny fianarana ambaratonga ambony tsy miankina amin’ny fanjakana milaza fa “habilité par l’Etat”. Diso ny filazana hoe: “université habilitée par l’Etat” fa formation(s) habilitée(s) par l’Etat no fiteny. Continuer la lecture →
Socio-eco	 20 mars 2017 R Nirina
Misedra olana ireo mpitari-posy entin-tanana izay fitaovam-pitaterana mahomby ary mahasarika mpizahan-tany ny fandehanana aminy. Vokatry ny fidiran’ireo fitaovam-pitaterana hafa manaraka ny fanatontoloana toy ny “bajaj” sy ny “cyclo-pousse” eto Madagasikara, nihena ny isan’ireo miasa amin’azy ity. Teraka noho izany ny hetsika goavana “hazakazaka posiposy mampiray tour 2017”. Continuer la lecture →
Socio-eco	 16 mars 2017 R Nirina
MORONDAVA : Harato 40 nogiazana, taiza hatramin’izay ny manam-pahefana tamin’ireo mpanjono tsy manara-dalana ?
Harato manodidina ny 40 isa no nogiazana tao amin’ny kaominina ambonivohitra Morondava androany. Continuer la lecture →
Socio-eco	 14 mars 2017 R Nirina
DES LEMURIENS AU PAYS DES CIGOGNES: Hetsika fampisehoana ny maha Malagasy any Strasbourg.
Sambany tamin’ny tantaran’ny toe-karena Malagasy no nisy hetsika natokana ho fampirantiana ny maha Malagasy any Strasbourg. Mandritra ny fito andro be izao no hanaovana izany, any amin’ity tanan-dehibe an’ny Eropeanina ity. “…des lémuriens au pays des cigognes”, hetsika ara-barotra hampahafantarana ny fomba fanao sy fahaiza-manao rehetra mampiavaka ny firenena Malagasy toy ny sakafo, asa tanana, fizahan-tany, ny kolotsaina… Continuer la lecture →
Socio-eco	 10 mars 2017 R Nirina
VAKY NY FEFILOHA ENY MALAZA
100 Metatra ny halavan’ny fefiloha vaky eny Malaza…difotry ny rano ireo tanim-bary.